प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलियाको नाम अनुमोदन, सुनवाईमा कांग्रेसलाई सत्तारुढ सांसद भट्टराईको जवाफ - radionrn.com
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका दिनेश थपलियाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उजुरीकर्ता र थपलियासँग छलफल गरेपछि सुनुवाइ समितिले उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । थपलियाविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको थियो । समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले थपलियाको बचाउ गरेका थिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसदले सोधेका कतिपय प्रश्नको जवाफ सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले दिनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले गएको चैत ११ गते थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । थपलिया सत्तारुढ नेकपा तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अमुक दलसँग विशेष सम्बन्ध भएको तपाईं जस्तो व्यक्तिले गराएको चुनाव निष्पक्ष हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि थपलियालाई ‘तपाई जस्तो पार्टीको क्याडर आरोप लागेको व्यक्तिबाट हुने चुनाव निष्पक्ष हुन्छ? कसरी विश्वास गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर समितिमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ थपलियाले दिनुपर्ने भए पनि त्यसभन्दा पहिल्यै सत्तारुढ दलका सांसद योगेश भट्टराईले दिनुभयो । उहाँले कुनै विचारधारासँग नजिक हुँदैमा कुनै व्यक्तिले संवैधानिक निकायमा गरेर पूरा गर्ने जिम्मेवारीप्रति आशंका गर्न नहुने बताउनुभयो ।
भट्टराईले कुनै राजनीतिक विचारसँग आस्था हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले लोकसेवा आयोगको प्रमुख कुन विचारसँग नजिक छन् भनेर कसैले प्रश्न उठाएको छ र?’ भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो । अहिलेका लोकसेवा आयोगका प्रमुख उमेश मैनाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् ।
बैठकमा थपलियाले आफू कुनै दलको सदस्य नभएको दाबी गर्नुभयो । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोग सत्ताबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि लागिरहन्छ । तर अहिले अनुमोदिनत भएका थपलीयाले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम भएमा त्यसमा धेरै सुधार पक्कै आउनेछ । तर सत्ताधारी दल निकट मानिएका थपलियाले आफूलाई कत्तिको निष्पक्ष राख्न सक्नछन् त्यो भने समयले नै बताउला ।